दसैँ बिदा – Health Post Nepal
दसैँ बिदामा नियमित तथा आकस्मिक स्वास्थ्योपचार सेवाको उपलब्धता सबैको चासोको विषय हो । मुलुक दसैँमय बनिसकेको छ । तर, रोगले चाडपर्व भन्दैन । अझ वर्षदिनको प्रतीक्षापछि आएको महान्तम पर्व दसैँ विशेषगरी मिठा–मिठा परिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले असन्तुलित तथा अधिक भोजनका कारण रोगको जोखिम झन् बढी हुन्छ । यस्तोमा चाडपर्वको लामो बिदामा स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध स्वास्थ्यसंस्थाबारे खुलदुली हुनु स्वाभाविक छ । त्यसैले यहाँ राजधानीका प्रमुख अस्पतालहरूमा दसैँ बिदामा स्वास्थ्यसेवाप्रवाहको अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नु वाञ्छनीय छ ।
मुलुकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो अस्पताल वीरले दसैँमा ३ दिन ओपिडीसेवा बन्द गर्ने भएको छ । फूलपाती (आज) शनिबार परेकाले यसै पनि ओपिडीसेवा बन्द नै छ । अष्टमी, नवमी र दशमीका दिन अस्पतालमा ओपिडीसेवा बन्द रहने निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले जानकारी दिए । तर, आकिस्मक सेवा भने सधैँ खुला रहनेछ । आकस्मिक कक्षमा सेवाका लागि आउने बिरामीका लागि भने सबैखाले सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि हरक्षण डाक्टर उपलब्ध हुने डा. सेन्चुरीले जानकारी दिए । ‘चाडपर्वका वेला अस्पताल बन्द हुन्छ भन्ने भ्रम कसैलाई नहोस्,’ डा. सेन्चुरी भन्छन्, ‘वीरमा आएका बिरामीले सेवा नपाएर फर्कनुपर्ने छैन ।’
कान्ति बाल अस्पतालले पनि दसैँ बिदामा जम्मा ३ दिन ओपिडीसेवा बन्द गर्ने भएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाका अनुसार दसैँमा अष्टमीदेखि मंगलबार (टीकाको दिन) सम्म ओपिडीसेवा बन्द रहनेछ । ओपिडी बन्द रहे पनि आकस्मिक सेवा भने २४ घण्टै खुला रहने निर्देशक बिच्छा बताउँछन् । ‘अस्पतालमा आएका बिरामी सबैले सेवा पाऊन्, दसैँका कारण केही पनि सेवाविहीन घर नफर्कियून् भन्ने उद्देश्यका साथ तयारी गरेका छौँ,’ डा. बिच्छाले भने, ‘यसका लागि हामीले थप ३ जना डाक्टर राखेका छौँ, जतिसुकैवेला अस्पताल आउँदा बिरामीले सेवा पाउनेछन् ।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा दसैँको टीकाको दिनबाहेक ओपिडीसेवा सुचारु रहनेछ । डेंगुको महामारी फैलिरहेको तथा अत्यावश्यक रेबिज तथा सर्पदंशको भाक्सिन लगाउनुपर्ने भएको हुँदा अस्पतालमा सेवा बन्द नगरिएको निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन् ।
‘टीकाको दिनबाहेक अन्य दिनमा बिहान ९ बजेदेखि हिउँसो २ बजेसम्म ओपिडी खुला रहनेछ,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर डाक्टर तथा कर्मचारीको बिदा चाडपर्वअनुसार आलोपालो मिलाएका छौँ ।’
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा आइतबारदेखि बुधबारसम्म ओपिडीसेवा बन्द रहनेछ । आकस्मिक सेवा भने हरेक दिन २४ घण्टै सुचारु रहने अस्पतालले जनाएको छ । दसैँमा अष्टमी, नवमी, दशमी र एकादशी गरी ४ दिन ओपिडी सेवा बन्द रहने निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार आकस्मिक कक्षमा युनिट–युनिट गरी ड्युटी मिलाएर सेवा सुचारु गरिनेछ ।
नियमित १० देखि १२ जनाको संख्यामा चिकित्सक अस्पतालमा रहने गौतम बताउँछन् । दसैँ बिदाको हरेक दिन, टीकाको दिनसमेत अस्पतालमा चिकित्सक कार्यरत रहने उनको भनाइ छ । तर, टीकाको दिन भने केही समय ब्रेक गराउन निर्देशन दिएको गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार ६ घण्टा ड्युटीमा रहँदा टीकासमेत लगाउन नपाउने अवस्था आउने भएकाले ब्रेक गराउन भनिएको हो । दसैँ, टीका तथा अन्य कुनै पनि कुराले डेलिभरी नरोकिने भएकाले निरन्तर सेवा दिइने गौतम बताउँछन् ।
‘दसैँका वेला झन् धेरै जोखिमका केस आउने गरेका छन् । जति बिरामी आउँछन्, जोखिमकै बढी हुन्छन्,’ डा. गौतम अनुभव सुनाउँछन्, ‘त्यसकारण चाडपर्वका वेला चिकित्सकहरू अन्य समयभन्दा झनै व्यस्त हुन्छन् ।’
Posted in खबर, मुख्य खबरTagged कान्ति बाल अस्पताल, टेकु अस्पताल, दसैँ बिदा, प्रसूतिगृह, वीर अस्पतालLeaveaComment on टेकुमा १ दिन, वीर र कान्तिमा ३ दिन, प्रसूतिगृहमा ४ दिन ओपिडी बन्द, आकस्मिक कक्षमार्फत जुनसुकैवेला सेवा